Umqondo wezikole zaseMontessori neMontessori kindergartens
Ukufunda nazo zonke izinzwa - i-felt 1000 eMontessori
Izikole zaseMontessori kanye ne-kindergartens eJalimane
"Ngisize ngikwenze ngokwami", umqondo kaMontessori - I-Montessori yokufundisa ibuyela emuva ku-pedagogue nodokotela uMaria Montessori. Le 1870 yazalwa e-Italy futhi ivela ekhaya elihle kakhulu.
UmKristu ofundisiwe futhi ohambele kahle, wayezinikezele kakhulu emalungelweni abesifazane namalungelo abo. Wasebenza esibhedlela enezingane ezikhubazekile ngokwengqondo, kodwa wathola ukuthi bazimisele ukufunda nokulalela, kodwa kuze kube manje abanakho umqondo ofanele.
UMaria Montessori wakhetha izinto ezizwakalayo ikakhulukazi kulaba bantwana ukusiza izingane zikhule. Ngokusekelwe kulokhu, i-Montessori pedagogy yathuthuka eminyakeni eminingi. Umqondo oyisisekelo wocwaningo lonke ngumgomo oqondayo owaziwayo: Ngisize ukuba ngikwenze ngokwami!
Yini eyenza i-Montessori pedagogy?
I-Montessori pedagogy ibeka ingane emkhatsini wezemfundo, ingane ingumakhi wakhe oyinhloko futhi isisusa ngesimo somvuzo nesijeziso akudingekile nhlobo. Izingane, ngokusho kwabalandeli bakaMontessori, zingathanda ukuzifunda zodwa futhi zikhuthazwe ngaphakathi, ngoba umqondo wokuzifaka ezweni elikhulile liyisinqumo esinqunyiwe.
Ngokusekelwe kulezi zizathu, izikole zaseMontessori zifundisa umsebenzi omkhulu wamahhala nezifundo ezivulekile. Izifundo zinikeza igumbi lomntwana ukuthi lizame futhi lithole ulwazi. Ingane enezikhono zayo ikhona ngaphambili, inquma izinga layo lokufunda futhi ihlakulela ngesigqi sayo. Kunalokho, kufundiswa kuphela ukulingisa izinto.
Isibonelo, eMontessori kindergartens, izingane zikhuthazwa ukusetha itafula ngokubukela ngokuphindaphinda futhi ngesikhathi esifanayo uzama ukuzisiza.
I-Montessori yokufundisa ihlukanisa ukuthuthukiswa kwengane yaba yizigaba ezintathu. Isigaba sokuqala sengane (iminyaka ye-0-6), isigaba sesibili sokubantwana (iminyaka ye-8-12) kanye nentsha (iminyaka ye-12-18). Kuzo zonke izigaba ezintathu izinzwa zidlala indima ebalulekile, ngoba izingane zinesifiso semvelo sokunambitha, ukuthinta nokuphunga konke.
Ukuqonda ngomqondo wangempela kuwumqondo oyisisekelo ezikoleni zaseMontessori nasezinkulisa. Ukufunda kungcono kakhulu kwenziwe ngezinzwa kunokuba kungabonakali, ngakho ukufunda kuzoba ngcono, kusho abameli. Ngalokhu kugcizelelwa ezinhliziyweni, indaba ekhethekile yokufunda ithuthukiswe. Esikhathini semathematika, isibonelo, i-pearl imigexo isetshenziselwa ukwenza izinombolo eziqondakalayo, okungukuthi, ezibonakalayo. Amabhuloki amapharele anezicucu ze-1000 ezifanekisela izinombolo eziphakeme futhi avumele ingane ukuthi ikwazi kangcono ukulinganisa amasayizi - hhayi nje ekhanda, kodwa futhi yazizwa.
EJalimane, izikhungo zokunakekelwa kwezinsuku ze-600 zisebenza ngokuvumelana nomqondo kaMaria Montessori. Ekuqaleni kwe-2013 kwakukhona izikole zasepumalanga ze-225 nezikole zasekondari ze-156 ezilandela lezi zimiso. Izikole ziningi kakhulu futhi zibeka intuthuko yengane enkabeni yemigomo yawo.
Abaningi abagxekayo babona ukuguqulwa esikoleni esiphansi saseMontessori ukuya esikoleni esiphakeme njengenkinga. Kodwa-ke, kuboniswe esikhathini esidlule ukuthi izingane azikho ubunzima. Okuqukethwe kwekharikhulamu akufani nalezo zesikole esivamile, kodwa indlela ibalulekile, ingane ifunda kanjani lokhu okuqukethwe.
Umsebenzi wamahhala, ukhetho lomlingani, umsebenzi weqembu, ukufundisa okuvulekile ngethuba elikhulu lokunyakaza, isikhathi sakho isikhathi esilandelayo kuphela ezinye zezici ezitholakala ezikoleni zaseMontessori. Ekugcineni, ingane iyazuza kulezi zinyathelo ngoba ifunda ukusebenza ngokuzimela.